Dowladda Itoobiya oo Danjire cusub u soo Magacaawday Dalka Soomaaliya - Hablaha Media Network
Dowladda Itoobiya oo Danjire cusub u soo Magacaawday Dalka Soomaaliya
HMN:- Madaxweynaha dalka Itoobiya ayaa maalintii shalay ahayd danjire cusub u soo magacowday dalka Soomaaliya, kadib markii uu waqtigiisa dhamaaday danjirihii hore ee dowladda Itoobiya u fadhiyay Magaalada Muqdisho.
Danjiraha cusub ee Dowladda Itoobiya ay u soo magacaawday dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu magacaabaa Jamaaludiin Mustafa Cumar, isagoo horey u ahaa ku xigeenka Itoobiya ee Soomaaliya.
Jamaaludiin Mustafa Cumar, ayaa waxa uu sidoo kale Dowladda Itoobiya u yahay Wakiilka gaarka ah ee Dowladda Itoobiya u qaabilsan arrrimaha Soomaaliya, wuxuuna shaqadan kala wareagayaa C/Casiis Axmed Aadan.
Mulatu Teshome Madaxweynaha Dalka Itoobiya, ayaa warqad ka soo baxday Xafiiskiisa loogu soo magacaabay Danjiraha cusub ee Itoobiya u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sida ay baahisay Wakaaladda Wararka Itoobiya ee ENA.
Safaaradda Itoobiya ayaa waxa ay weli ku dhex taallaa Xarunta Madaxtooyadda ee Villa Somalia, gaar ahaan meel ku dhaw xafiisak Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya.